Zonke Panthers ezihlobene nokusebenzelana nolaka nobudlova. Mhlawumbe, e elithile, lokhu kungenxa umbala omnyama izinwele. Kukholakala ukuthi lokhu umbala eyinhloko, esadaleka ngenxa yokweqisa melanin. Eqinisweni, amakati black yalolu hlobo akuyona okuningi njengoba kubonakala. Kwenqwaba kwesikhumba isilwane amathoni omnyama ensundu.
Panthers White ezingavamile kakhulu. Ososayensi bakholelwa ukuthi kungenzeka umbala uboya ne-isifo (leucism) noma ama-albino. Ezinye izinketho awacatshangwa, njengoba umbala omhlophe ukuze Panthers akukhona okungokwemvelo futhi kubhekwa okuhlukile nemithetho. Cats bazalwa nale coloration nge cishe imvamisa efana nezinye izilwane albino.
Ukuvela nezinye izici
Kuze kube manje, ochwepheshe kungukuthi subsiding impikiswano mayelana lesi silo. Abanye bakholelwa ukuthi ikati emhlophe kufanele uhlukane ifomu jikelele we Panthers futhi libhekisela pumam, jaguar. Abanye baphikisa ngokuthi incazelo bokuphila isilwane albino kuyafana ukuthi isihlobo sakhe amnyama.
Isilinganiso umzimba obuphelele ikati okuzingela ifinyelela 1 imitha ukuphakama - 70 cm, futhi isisindo - mayelana 60 kg. Umsila we eside wakhe - 1 imitha. Nakhu inkosikazi, yona panther omhlophe! Photo ngobuciko uqinisekisa ukuthi kakusikho ukusoka okusobala enyameni kubukeka iyafana nozakwabo umbala. Ngaphezu kwalokho, leli kati albino ethize isakhiwo amalaka, elingelakwaJuda kuphela Panthers.
Kuyinto isici bhá kwalezi zilwane kusukela nezinye izilwane ezidla, ebavumela ukushicilela ukubhonga enamandla. It is wafakazela ukuthi emphinjeni ngakho Panthers ungase zigcwala ngenxa yokuthi omunye amathambo apharathasi hypoglossal has a umsipha nezimo. Ngaphandle yezwi ngokwabo ijabulise e isakhiwo, okwenza umbukwane nomzingeli uyabhonga.
Lezi amakati zasendle olfactory izitho athuthukiswe kahle, kuhlanganise ama-albino. Kumele kuqashelwe ukuthi ayikho welithi "umhlambi panthers elimhlophe", cishe, kuyoba eyodwa, kakhulu akuvamile - amakati amabili phakathi kwezihlobo ezinyamanye amnyama.
Ikhaya le Panthers?
Lezi Abantu abahlukumeza abanye bahlala eningizimu-ntshonalanga ye-China, e-amahlathi emvula aseNingizimu-mpumalanga Asia, Nepal, Manje iBurma isibizwa eningizimu yeNdiya. Indawo zamakati zasendle kabanzi ngempela. I Panthers atholakala esiqhingini Java, e-Ethiopia, Kenya emahlathini Afrika Aberderese.
Ngokuvamile amakati feral abahlala eduze wezokuHlaliswa kwaBantu, kodwa zama ukuhlala ngaphandle. Esikhathini emini ayakhululeka, ukugibela ezihlahleni. Lesi simo ibanikeze nokuvikeleka. Uma kumnyama, Panthers uhambe abazingeli.
Kanjani ukuzingela amakati?
Babukeka out inyamazane emhlabathini, kodwa ngokuvamile ezidla izihlahla. Ngokwesibonelo, izinkawu. Njengazo zonke amalungu omkhaya ikati, Panthera - izilwane nezimo futhi beshesha. Ziyakwazi kulula sifinyelele kwi izihlahla mayelana 6 amamitha eliphezulu.
Abanye abafundi bangase bazibuze ezidla yokuzingela omnyama nomhlophe, yini umehluko zikhona phakathi kwabo. Panther White ezingeni imizwelo engokwemvelo ngonanzelelo.
Dark isilwane kulula yokuzingela ngenxa umbala wabo. Phela, ikati emhlophe kufanele enze umzamo omkhulu ukuze kungaqashelwa ebusuku. Ngenxa yalokho, wazifihla emahlozini aminyene izitshalo ngokucophelela.
It is wafakazela ukuthi albino ikati kakhulu ziyancipha kokuzwa futhi kukhona iziyaluyalu ezihlobene nombono. Nanguya esingokwemvelo ongazibheka umdlalo isikhathi esingaphezudlwana omnyama, futhi kudingeke ukuba sincike kakhulu iphunga. Zonke ezinye imikhuba yakhe azihlukile kakhulu kwabanye panthers.
Iphinde ukudansela isiginci sakhe inyamazane yayo phezu amagatsha emithi ukuba nezinye izilwane ezidla musa bawususe. Nokho, ososayensi aveze ukuthi panther albino nzima ephila endle. Kuyaphawuleka ukuthi nokushoda emhlophe enhle umdlalo feeds ngamaqanda izinyoni ezihlukahlukene, izithelo kanye namakhambi nikhula habitable zone.
Okuxakayo ukuthi la panther amnyama akuyona njalo esizicabangelayo njengezaba albino cat-ubulili umlingani. Ngakho-ke, ayivamile ithatha ingxenye ekuqomisaneni iphakethe ingagcinwa ngaphandle. Nakuba ubudlova phezu ingxenye izihlobo ososayensi abazange uqinisekise. Uma ukubhanqa sisekhona ke panthers ezimhlophe ozalwa ukukhanya amazinyane ensundu, kodwa iningi albino.
It is wafakazela ukuthi empilweni zasendle amnyama Panthers iminyaka 10-12 basekuthunjweni - iminyaka engaba ngu-20. amakati White aphile ngisho kancane - endle iminyaka 5-6, eziqiwini kuze iminyaka 12-15. abaqeqeshi Circus ziye zaphawula ukuthi Panthers kukhona ezingalindelekile kakhulu enkundleni. Kubandakanya emhlophe.
Ngakho-ke, lolu hlobo ikati - umbono ongavamile esiyingini esekisini. Naphezu kwakho konke lokhu, panthers yizilwane ezisengcupheni. Ngenxa yokuthi abantu babazingele ngenxa noboya enhle. Usuku ngalunye oludlulayo inani la ubuhle kuyehla. Avame kudidaniswe izingwe panthers nomhlophe - ne Cougars. Uma nicela noma yini owakhileyo bomdabu: "Ingabe kukhona panther mhlophe esifundeni sakho" - ukuthi ungathola impendulo: "amakati omkhulu omhlophe uhlala ezintabeni, futhi cishe akekho ongibonayo."
Eqinisweni, sikhuluma pumah ingwe. Naphezu ukufana yayo le Panthers, izilwane ihluke nomunye. Ngokwesibonelo, ingwe lincane kakhulu ngobukhulu. Cougars ngempela ukuhlangabezana umbala okhanyayo: grey, abomvana, kodwa omhlophe emsulwa ezingavamile. Ngaphezu kwalokho, zingabantu kunenani Panthers nomsila yabo mufushane.
Kunezinye umehluko omkhulu kule skeleton phakathi zonke lezi amakati. Ekugcineni, i-White Panthers kukhona ehlathini, futhi Cougars bahlala ezindaweni eziyizintaba.
izinganekwane Bangaki sakhiwa amakati omhlophe! Badumisa ubuhle, lobubhalo kanye umusa we panther. Ngo-legends alesi silo lasendulo ngokuvamile zimelela isithombe sowesifazane: eqinile, kodwa ulaka nokuhlupha esikhohlisayo.
EGrisi, lesi silwane ayebhekwa unkulunkulu iwayini. Abantu babecabanga ukuthi Panther ivikela emadilini ezidakayo nezinto zokuhlanza Brewfest ukuziphatha. Ezinye izizwe wayekholelwa ukuthi ikati ulakho ukukhipha phansi amabutho amnyama. Ngakho-ke, ngokuvamile bawungenisa panthers izindawo isisulu - inyoni, iwundlu, izinyane lembuzi ngomzamo zemikhaya evelele ukuze kushwelezwe ukuziphatha isilwane. Kodwa kwaba khona abahlala ebona ikati zasendle ukuba umvikeli wakhe nomvikeli.
Ngokusho kweminye ezinganekwaneni, le panther kuphela Ngikhumbule dragon bese ulwela ukulondoloza abantu bakhe emlilweni okubi. Kukhona legend ukuthi unina engcono kunazo zonke izilwane - White Panthers. Animal World uqokomisa isibindi sabo akhethekile uthando olukhulu kakhulu izingane zabo siqu.
Legend of the White Panther
Ngokusho yetinsita wasendulo, kanye black panther ngokuphuthumayo sivikele amazinyane wakhe zafinyelela kusukela dragon, naphezu kweqiniso lokuthi wayengenzanga ashisiwe izinwele zakhe ezimnyama amahle. Kodwa kunqoba baya kuye - nesitha nomlilo-ukuphefumula wahlulwa! Njengoba olunikezwa ukuhlonishwa onkulunkulu jungle wanika Panther umbala entsha - noboya ezimhlophe ukugqama abanye.
Eqinisweni, emhlophe panther uzozala kukalutshwana kakhulu, kwelinye icala kwayinkulungwane. Ngokusobala, ixhunyiwe nale okunamathiselwe Amazing kwabasebasha. Abantu bendawo basakholelwa kwale nganekwane kubhekwa uphawu oluhle ukubona panther emhlophe phakathi black amakati. Ngiqinisile umbono omuhle!
Iselesele zobumba - i amphibian nge idumela elibi. Ingabe kuyiqiniso lokhu?
Surface bushelelezi yamanzi - nesibuko isithombe kwesibhakabhaka
Hansen - ukugcwaliswa Uketshezi izinhlobo ezahlukene ugwayi electronic
Ithuluzi zokususa ukwahlukanisa kusuka izintambo. Ehlubula Ehlubula
DVR isivinini isicupho isixwayiso Street Storm Str-9970 Twin: Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Utamatisi ne isitshalo seqanda: iresiphi